Hari | नुवागी
हामी अलिकति मिश्रित अवस्थामा छौं। केही सकारात्मक पक्षहरु पनि छन् । पहिलाको भन्दा धेरै ठूलो भएर आएको पनि छ, गुणस्तर र पहुँचका हिसाबले । गुणस्तरमा केही समस्याहरु छन् । गुणस्तरमै पनि पहिलाभन्दा धेरै नै राम्रो भएको अवस्था भएको पाउँछु म । सर्वसाधारणको पहुँचमा नभएको अवस्थाबाट हामी धेरैजसो अत्यन्तै गरिब र पिछडिएको अवस्थालाई छोडेर अन्य निम्न […]
हरिसुन्दर छुकां/ भक्तपुर । राजधानीसँगै जोडिएको भक्तपुरको एक विद्यालयको कक्षाकोठा एकातिर छ भने शिक्षकशिक्षिकाको कार्यालय एकातिर । ‘स्कुल त्यता छ, अफिस यता छ ।’ सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ५ कटुञ्जेको कटुञ्जे आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक यम पी. भुसालले भने । उनले कक्षा एकातिर अफिस अर्कोतिर हुँदा पठनपाठनमा समस्या भएको बताए । स्थानीय तहमा शिक्षाका अधिकार आएसँगै त्यसलाई […]
काठमाडौं २४ साउन । गोदावरी नगरपालिकाले संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत शिक्षा नियमावली बनाएको छ । संविधानमा सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि गोदावरी नगरपालिकाले भने आफूले बनाएको शिक्षा नियमावलीमा शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीको परिच्छेद–१४ मा विद्यालयको वर्गीकरण तथा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो व्यवस्थामा ‘दफा ८७ […]
भक्तपुर २४ साउन । दुई शब्दको नाम फेरेर ६ शब्दमा पुगेको साविकको शिक्षा विभागको नाम भने बाहिरमात्र फेरिएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लेखिएको साइन बोर्ड विभागको दुई ठाउँमा झुण्ड्याएर फेरिएको झल्को दिन खोजे पनि अझै बाहिरमात्र फेरिएको कुराका लागि केन्द्रको भित्रको तथ्य काफी छ । मुख्य गेटबाटै दखिने गेटमा मात्र नभएर […]
भक्तपुर, २३ साउन । शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षामा सहभागी ‘केही परीक्षार्थी’ को परीक्षा नै रद्द गरेको छ । स्थायी भएर पनि अस्थायीको परीक्षामा सहभागी भएका त्यस्ता शिक्षकको परीक्षा रद्द गरेको आयोगले आज प्रकाशन गरेको सूचनामा जनाइएको छ । ‘यस आयोगको सिफारिश बमोजिम निम्न माध्यमिक तहमा स्थायी नियुक्ति लिई सकेका केही शिक्षकहरुको मिति २०७५।३।२९ […]
काठमाडौं २२ साउन । ‘राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मान’बाट एक शिक्षक पनि सम्मानित हुने भएका छन् । दुर्गम ठाउँमा शिक्षाको प्रवद्र्धनमा लागिरहेका शिक्षक विनोद शाहीलाई युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयले सम्मान गर्ने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा सम्मानित हुने १० युवाको लिस्टमा शाही पनि परेका छन् । यही साउन २७ गते अर्थात् अगस्ट १२ का […]
अतिरिक्त क्रियाकलापले नियमित सिकाइलाई स्तरीयमात्र बनाउँदैन, यसले व्यक्तिमा मौलिक चिन्तन, नेतृत्व गर्ने सीप र सिर्जनशीलता पनि विकास गराउँछ । अतिरिक्त क्रियाकलापले विद्यार्थीलाई मात्र नभएर सिंगो विद्यालयलाई पुर्याउने गरेको भए पनि विद्यालयहरुले, शिक्षकहरुले , अभिभावकहरुले अझै पनि मात्र पढाइलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
भक्तपुर । निलो रङको ‘डल्फिन’ तर समुद्रको होइन, कृत्रिम, प्लाष्टिकले बनेको । त्यसलाई शिक्षिकाले बुढी औंला र चोर औंलाले कलम समाएको जस्तै गरी समाइन् । अनि विस्तारै कितावतिर अघि बढाइन् । चिल्लो कितावको एक चित्रमा उनले त्यही ‘डल्फिन’ को मुखले चित्रमा छुवाइन । त्यहीँबाट आवाज आयो । ‘डग’ त्यसैगरी अर्को चित्रमा पनि छुवाइन्, त्यहाँबाट पनि […]
साउन १९, भक्तपुर । वि.सं. २००९ सालमा छाप्रोबाट सुरु भएको वागीश्वरी माविको आजको स्थितिसम्म प्रगति गर्न पूर्व विद्यार्थीहरुको योगदानलाई वागीश्वरी माविले कदर गरेको छ । हीरक वर्ष २०७५ को उपलक्ष्यमा शनिबार आयोजित भेला कार्यक्रममा २०५१ देखि २०६० सम्मका एसएलसी उत्तीर्ण पूर्व विद्यार्थीहरुको उत्साहवद्र्धक उपस्थिति रहेको थियो । पूर्व विद्यार्थीहरुले आ–आफ्नो व्याचको भेलाबाट छानिएका प्रतिनिधिहरुले […]